खोपको राजनीति डरलाग्दो, अमेरिकाको पछि लाग्दा भारतलाई पीर - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ५ असार २०७८, 9:07 am
भारतको सेरम रिसर्च सेन्टरले लाखौं अमेरिकी डलर बैना बुझेर पनि नेपाललाई १० लाख डोज कोभिसिल्ड महिनौं बितिसक्दा दिएको छैन । खोप उत्पादन कम भएको कारण देखाउँदै त्यहाँको अदालतले निकासीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । बंगलादेशले नेपालभन्दा पहिले नै भारतसँग खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उसले पनि पाएको छैन ।
भारतले अमेरिकाले खोप उत्पादनमा आवश्यक कच्चा पदार्थ (केमिकल) मा रोक लगाएपछि भारतमा खोप उत्पादन हुन छाडेको बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्दा यतिखेर अमेरिका र भारतको राजनीतिक छाता एउटै हो । चीनविरोधी राजनीति र व्यापारको रणनीतिमा उनीहरू सँधै एउटै मोर्चामा देखिने गरेका छन् । तर, त्यहि अमेरिकाले भारतलाई खोप उत्पादनमा असहयोग पुग्ने गरी कच्चा पदार्थमा रोक लगाउनुको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ ।
अमेरिकाले भारतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कच्चा पदार्थ रोक्नुमा युरोपियन युनियन (इयु) ले अनिच्छा देखाएको बेलायतको अक्सफोर्ड अष्ट्राजेनेका भ्याक्सिनसँग जोडिएकाले हो । भारतमा उत्पादित सेरमको कोभिशिल्ड खोप बेलायती अष्ट्राजेनेकाको भारतीय संस्करण हो । युरोपका फ्रान्स, जर्मनीलगायतका सबैजसो मुलुकले बेलायती अष्ट्राजेनेकाप्रति अनिच्छा देखाउनुको कारण बेलायत युराेपियन युनियनबाट बाहिरिएपछि त्यसप्रति अरुची देखाएका हुन् ।
एउटा बेलायत एकातिर र बाँकी युरोप अर्कोतिर हुनेगरी बेलायतले गरेको राजनीतिक निर्णयको विरुद्धमा उनीहरू बेलायतको खोप अघोषित रुपमा बहिष्कार गर्न बाध्य भएका हुन् । त्यसको सोझो फाइदा अहिले अमेरिकालाई पुगेको छ ।
अमेरिका विश्वका अधिकांश देशमा बेलायती खोपले बजार नलिओस् भन्नेमा सचेत हुँदै आफ्नो रणनीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । त्यसले भारतको सेरमले उत्पादन गर्ने खोप बेलायतको अष्ट्राजेनेका जस्तै हो । त्यसैले अमेरिका दक्षिण एसियामा अझ भारतमै पनि बेलायती खोपले महत्व नपाओस् भन्नेमा सचेत देखिन्छ ।
अहिले कोरोनाविरुद्धको खोपमा विशेषगरी बेलायत–अमेरिका, बेलायत–भारत र भारत–अमेरिकाबीचको छुट्टछुट्टै राजनीतिले घर गरेको छ । त्यसैले मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले विश्वमा अहिले कोरोनाविरुद्धको खोपलाई औषधिभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रणनीतिक हतियारको रुपमा विकसित हुँदै आएको छ । कसको खोप राम्रो ? कसले धेरै बिक्री गर्ने ? र, कसको प्रभाव बढी ? भन्ने राजनीतिले काम गर्न थालेको कुटनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
केही समयअघि भारतको सेरमले उत्पादन गरेको खोपले विश्व बजारमा आधिपत्य जमाउने आशयको खबर बाहिरियो । निकै सस्तो खोप उत्पादन गरेर भारतले चीनलाई समेत उछिनेको प्रचार भयो । भारतको उक्त रणनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेको अमेरिकाले सेरमलाई आ’क्रा’मक ढंगले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नदिने रणनीति लियो । भारतलाई सस्तो खोप उत्पादन गर्न दिँदा आफ्नो महँगो जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप बिक्री नहुने पक्का थियो ।
जोन्सन एण्ड जोन्सन अमेरिकी कम्पनी हो । त्यो खोप बिक्रीका लागि पहिले नै अमेरिकाले भारत, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड ग्रुपसँग एउटा समझदारी गरिसकेको थियो । त्यस्तो खोप भारतले उत्पादन गर्ने, अमेरिकाले त्यसको वौद्धिक अधिकार राख्ने, जापानले लगानी गर्ने र अष्ट्रेलियाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई उक्त खोप खरिदको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने समझदारीका कारण भारत अहिले अप्ठेरोमा परेको हो ।
सेरमको कोभिशिल्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अमेरिकी जोन्सन एण्ड जोन्सनको भ्याक्सिन मात्रै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । जोन्सनको एक मात्रा खोप लगाए पुग्छ तर सेरमको तुलनात्मक रुपमा सस्तो छ । त्यसैले बेलायती अधिकारप्राप्त खोप भारतमा उत्पादन गर्न अप्ठेरो पार्न अमेरिकाले कच्चा पदार्थमा कटौती गरिदियो ।
भारतले तेस्रो विश्वमा अब आफू खोपको लागि प्रमुख राष्ट्र भएको आवाज दिन थाल्यो । चीनभन्दा पनि अघि बढेर ६० देखि ७० वटा देशमा उसले खोप अनुदान दिएर मार्च महिनामा नै बजारीकरण गर्यो । तर, अमेरिकालाई भारतको त्यो काममा चित्त बुझेन । प्रजातन्त्र र राजनीतिको विषयमा चीनसँगको लडाईंमा उ एक हुन चाहन्छ । तर आफ्नै जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोपविरुद्ध आएको व्यापारलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न अमेरिका तयार थिएन । त्यहि रणनीतिमा खोप उत्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी कच्चा पदार्थ निकासीमा भारी कटौती गरिदियो ।
अहिले देखिएको खोप राजनीति विश्वको वृहत्तर भूराजनीतिभित्रका पछिल्ला खेल हुन् । भारतले चीनसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको भए अमेरिकाले भारतलाई खोप उत्पादनको निम्ति कच्चा पदार्थ दिइरहन्थ्यो, त्यसमा कुनै शंका नै छ्रैन । तर, त्यसो गर्दा पनि जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप बिक्री गरेर अरबौं डलर कमाउने अमेरिकाको चाहना भने पूरा हुँदैनथ्यो ।
भारतमा उत्पादित सेरमको कोभिशिल्ड खोप ४ डलरमा बिक्री हुन थालेपछि विश्वका अरु कसैको पनि खोप बिक्री नहुने निश्चित हुँदै गएको थियो । अमेरिकाका मोर्डना र फाइजरको खोपको भाउ ६ गुणासम्म महँगो देखिन्छ ।
त्यसैले अहिले विश्वमा देखिएको महामारी र खोपको सम्बन्ध अरबौं डलरको व्यापार पनि हो । यो भूराजनीति पनि हो । प्राविधिक सर्वोच्चता कसले कायम राख्ने भन्ने राजनीति पनि हो । एकजना कुटनीतिज्ञ भन्छन् ‘खोपको अनुसन्धान र प्रविधिमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने होडबाजी पनि हो । समग्रमा खोप भनेको शक्तिराष्ट्रको राजनीतिक लडाईं र विश्वमा अब कसले शासन गर्ने भन्नेसम्मको योजना हो ।’
उनै कुटनीतिज्ञले भने ‘चीनको मोबाइल कम्पनी हुवावेको फाइभजीको राजनीति पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकै एउटा अंग हो । जसले फाइभजीमा फ्ड्को मार्यो उसको आरएण्डडीमा आधिपत्य हुनु स्वाभाविक हो । त्यसपछिको डाटा सोही कम्पनी वा देशले लैजाने निश्चित छ । त्यसपछि संसारमा चिनियाँ शासनको माहौल बन्ने भएकाले पश्चिमा राष्ट्रहरू एकजुट भएर हुवावेको विरोध गरे ।’
विश्वमा अहिले डाटालाई न्यू आयल (नयाँ तेल) भनिन्छ । जसरी सन् ७० को दशकमा मध्यपूर्वका देश र विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरूको राजनीति तेलसँग जोडिएको थियो । अहिले त्यहि साउदी अरेबियाको शक्ति ३० वर्षअघिको तुलनामा भुत्ते भएको छ । अब सर्वत्र शक्ति डाटामा गएकाले डाटा इज पावर भन्न थालिएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप पनि त्यस्तै विश्व राजनीतिको अंग बनेर अघि आएकाले अहिले खोप किन्ने, बेच्ने र अनुदान दिने सबै काम राजनीतिसँग जोडिएको छ । विश्वमा अहिले भ्याक्सिनलाई न्यू प्रडक्ट भन्न थालिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भारतले खोप उपलब्ध गराउन नसकेको र धेरैले चिनियाँ भ्याक्सिन लगाउँदा विश्वास बढेको बताएपछि नेपालमा चिनियाँ खोप्रति आकर्षण देखिएको छ । आठ लाखले चिनियाँ भ्याक्सिन लगाएको कारण अहिले नेपालीको चिनियाँ खोपप्रतिको आस्था बढेको देखिन्छ । भारतले बैना लिएको रकमको समेत खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आफ्नै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन उसलाई धौ धौ भएको छ । स्वयम् भारले रुसबाट स्पुतनिक खोप खरिद गर्ने कुरोलाई समेत अघि बढाएको देखिन्छ । यो भनेको खोप कुटनीतिमा भारत पूर्णरुपमा असफल बनेको हो ।
यता चीनसँग खोप खरिद गर्नेबारे नेपालको सोमबारको क्याबिनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मूल्यको बारेमा अरु देशको तुलनामा निकै सस्तोमा दिइने र मूल्य सार्वजनिक गर्न नहुने उसको पहिलो शर्त रहेको छ । आवश्यक संख्या र डेलिभरीको सम्बन्धमा चीन तयार रहेको बताइन्छ । उसले यस्तो वचन तेस्रो विश्वका धेरै वटा देशलाई समेत दिएको छ ।
नेपालले अमेरिकाको जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप पनि खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि विश्व बैंक मार्फत् खरिद गर्न सबै जिम्मा उसैलाई दिइएको छ । विश्व बैंकको नेपालस्थित प्रतिनिधि र यसमा राम्रैसँग भिडेका छन् । ५० लाख डोज खोपको निम्ति विश्व बैंकले जोन्सन एण्ड जोन्सनलाई पैसा तिर्ने र विश्व बैंकले किनेर नेपालमा ल्याइदिने भनेर बैंकले आवश्यक प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।
अहिले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनमा अमेरिका किन आफ्नो आज्ञाकारी नेतृत्व राख्न चाहन्छ भन्ने कुराको समेत पुष्टि भएको छ । खोपलाई समेत त्यसैगरी प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउँदा भारत र बेलायत अचम्मसँग पाखा लागेका छन् ।